Mpanoratra YouTube maimaim-poana | Tia an'i YouTube maimaim-poana
Te-hanana mpanjifa maimaim-poana & ankamehana YouTube ve ianao?
Te hahazo mpanjifa bebe kokoa ve ianao ary tia mankafy amin'ny lahatsary YouTube? Ampidiro ny fantsona YouTube anao hiditra amin'ny fidirana ary hanomboka!
Makà Mpisoratra YouTube maimaim-poana ankehitriny! or Mividy mpanolotra YouTube
Raiso am-pitiavana ny mpanjifanao YouTube maimaim-poana, na andramana ny mpizaha birao sy ny fijerinay ary izay tiana na dia haingana kokoa aza!
Ny fisoratana anarana sy ny fisoratana anarana dia maharitra 30 segondra!
Ampio ny drafitra
Ampandehano ny drafitra maimaimpoana tena malaza sy mahomby, na manandrama drafi-karama.
Jereo ny Fivoaran'ny Channel anao
Zahao ny fitomboan'ny mpanjifanao sy ny horonan-tsarimihetsika!
Avelao aho izao!
Drafitra maimaim-poana & arosa
Ireo drafitra fanamboarana ary misy vidiny mifanaraka amin'ny zavatra ilainao
Mahazoa mpanjifa 5 ao anatin'ny 12 ora
Ny famandrihana dia fitazonana ambany kokoa
Manoratra anarana ianao ary toy ny horonan-tsary 6
Mahereza drafitra ataonao
Ampidiro 1x isaky ny 12 ora
Tsy maintsy ampahibemaso ny isan'ny mpanjifa
Tsy maintsy misy sary 1+ napetraka
Ajanony ny fampiasana amin'ny fotoana rehetra!
Làlana mankany Pro
Mahazoa mpanjifa 10-15 isan'andro!
Ny mpanjifa dia fitanana avo
Manoratra anarana ianao ary toy ny horonan-tsary 0
Drafitra dia 100% Automatic
Hanafoana ny fotoana rehetra!
Ao amin'ny làlam-pandehanana haingana
Mahazoa mpanjifa 20-30 isan'andro!
Mahazoa mpanjifa 40-60 isan'andro!
Fomba 15 hahazoana mpanjifa YouTube maimaim-poana bebe kokoa amin'ny orinasanao
Fantatrao ve fa manodidina ny 1.86 miliara ny mpampiasa YouTube manerantany amin'ny 2021? 18% ny olona mampiasa YouTube indrindra hanarahana orinasa sy marika.
Ireo antontan'isa ireo dia manazava mazava tsara fa raha toa ianao ka tompona orinasa tsy mampiasa ny herin'ny YouTube, dia very be dia be ianao! Ny atiny video no ho avy. Manampy tsy misy fika amin'ny fanitarana ny tratranao sy fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika izany. Saingy amin'ny fifaninanana tapaka tendany toy izany, ahoana no ahatazavanao ny ranomasina misy atiny video mora idirana?
Amin'ity bilaogy ity dia nanangona torohevitra sy tetika mahasoa 15 izahay hanangonana mpanjifa YouTube maimaim-poana hitondrana any amin'ny sehatra manaraka ny orinasanao. Ndao hiroboka mahitsy!
1. Angataho ny mpihaino anao hisoratra anarana
Na dia mety ho toa mazava aza izany, ny famporisihana fotsiny ny mpihaino anao hisoratra anarana amin'ny fantsonao dia mety ho ny zavatra ilaina rehetra hahazoana mpanjifa YouTube maimaimpoana. Mitovy amin'ny fomba fampidiranao ny CTA (Call to Action) mankany amin'ny faran'ny lahatsoratry ny bilaoginao, pejy fandraisana na lahatsoratra media sosialy hafa.
Ohatra, azonao atao ny manomboka ny horonan-tsarinao amin'ny fangatahana ny mpijery anao hisoratra anarana amin'ny fantsonao raha te hahita atiny bebe kokoa aminao izy ireo.
Raha heverinao fa ny fanombohana horonantsary amin'ny fangatahana famandrihana dia hitanao fa mpivarotra ianao, azonao atao izany amin'ny faran'ny horonantsary. Aza adino ny mampiseho ny antony ilana fisoratana anarana ny fantsonao sy ny atiny entinao ambony latabatra ho tombontsoan'ny mpijery anao. Ataovy tena izy ary asehoy azy ireo ny dikan'ny firotsahan'izy ireo aminao sy ny fomba anampiany anao hanao ny atiny tsara indrindra amin'ny maha mpamorona anao.
2. Mamorona atiny mahasarika
Mety ho toa tsy misy saina izany fa mila lazaina ihany. Be loatra ny mpamorona YouTube vaoavao no mahatsapa fa afaka ny ho tonga fahatsapana YouTube lehibe manaraka amin'ny alàlan'ny fandefasana atiny antonony. Vaovao tselatra: tsy afaka! Tototry ny horonan-tsary sy atiny amin'ny karazany rehetra ny Internet. Amin'ny safidy maro azo isafidianana, dia tokony afaka manolotra zavatra tokana amin'ny mpihaino anao izy ireo hijerena ny fantsonao ary hisoratra anarana amin'izany. Raha tsy izany dia manana safidy foana izy ireo hifindra any amin'ny fantsona manaraka tsara indrindra.
Aza adino ny manao ambaratonga midadasika alohan'ny hieritreretanao ny famoronana ny horonan-tsarinao manaraka. Raha tokony hamerina ny zavatra ataon'ny olon-drehetra ao amin'ny indostriao ianao dia mieritrereta any ivelan'ny-boaty ary mametraha ireo hevitra momba ny atiny tsy manam-paharoa. Tadiavo manokana ny 10 segondra voalohany amin'ny horonan-tsarinao satria azony atao ny hitaona ny mpijery anao na hampiato azy ireo.
Manontania tena. Fantsona inona no tianao hisoratana anarana? Iray izay mandefa indray mandeha isam-bolana mba handeha AWOL? Sa, fantsona hafa mandefa indroa isan-kerinandro tsy tapaka? Haintsika rehetra ny valiny - isika dia misafidy ilay manavao tsy tapaka ny fantson'izy ireo miaraka amin'ny atiny vaovao ho an'ny mpijery azy. Amin'ny maha mpamorona anao, ny mpihaino anao dia manantena anao handefa fotoana ara-potoana mba hitazomana azy ireo hifanintona sy hisarika mpijery vaovao koa. Arakaraka ny ahazoan'ny mpanjifa YouTube maimaim-poana no ahazoanao ny YouTube maimaim-poana. Mandresy!
Ny fananana fandaharam-potoana handefasana ny atiny dia mitazona anao ihany koa handamina sy hamokatra valiny. Tsy voatery voatery hipetraka eo alohan'ny solosaina ianao vao handeha mivantana ary mandefa azy. Azonao atao ny mampiasa fitaovana fitantanana haino aman-jery sosialy ahafahanao mandahatra ny horonan-tsarinao izay azo havoaka avy eo.
4. Mampiroborobo ny YouTube Channel anao amin'ny sehatra hafa
Raha efa manana tranokala ianao, ny fomba iray lehibe ahazoana mpamandrika YouTube maimaimpoana dia ny fampiasana ny fifamoivoizana tsy tapaka ao amin'ny tranonkalanao. Mampiroborobo ny fantsonao YouTube ao amin'ny tranokalanao. Raha mampiasa plugins mety ianao dia afaka manindry bokotra fotsiny ny mpihaino anao ary mankany amin'ny pejy YouTube anao hijerena ny atiny. Azonao atao koa ny mandinika ny fampidiranao ireo rohy YouTube ao amin'ireo bilaoginao mba hitaomana ny mpamaky anao hitsidika ilay pejy.
Fetsy lehibe iray hafa ny fampiroboroboana ny fantsonao YouTube amin'ny sehatra media sosialy hafa toa ny Twitter, Facebook, Instagram ary LinkedIn. Isaky ny manana horonan-tsary vaovao miakatra ianao dia azonao atao ny mizara ilay tranofiara na sombiny ao amin'ny tantaranao Instagram hananganana fanantenana. Raha nanangona mpanaraka mpanara-dia mendrika ianao amin'ireto sehatra ireto, ary tian'izy ireo ny zavatra ataonao, dia fotoana fohy monja izy ireo alohan'ny hahatongavan'izy ireo ho mpamaky lava.
5. Manampia mari-drano amin'ny horonan-tsarinao
Ireo mpamorona atiny ao amin'ny YouTube dia afaka manampy mari-drano kely amin'ny horonantsary noforoniny rehetra. Matetika ny mpamorona atiny vao manomboka dia tsy mahatsapa akory fa misy ny safidin'ny rano eo amin'ny lampihazo. Izy io dia kisary kely izay mihodina eo amin'ny zorony ambany ankavanan'ny horonan-tsarinao. Azonao atao ny manamboatra azy io amin'ny mari-pamantarana marika na mampiasa fari-drano izay mitovy amin'ny bokotra fisoratana anarana aorinan'ny YouTube.
Mampalahelo fa matetika ny marika watermark dia mety tsy voamariky na tsy hanosika ny mpijery handray andraikitra. Manoro hevitra anao izahay hifikitra amin'ny bokotra mena misoratra anarana izay ampiasain'ny YouTube matetika. Manamora ny fahitan'ny mpijery izany ary mora kokoa ny manindry azy ireo. Na izany aza, raha mbola te hamboarina ianao dia azonao atao ny manindry ny Customization eo amin'ny menio ary avy eo misafidy marika.
6. Manomeza topy maso ny amin'ny zavatra ho avy manaraka
Ny fomba iray tsara ahazoana mpamandrika YouTube maimaimpoana dia ny fampientanentanana ireo mpijery anao sy fiankinan-doha amin'ny atiny nataonao. Satria, raha vao izay tiany ny zavatra hitany, ny asanao dia hanao ny resaka rehetra ary hifikitra bebe kokoa izy ireo. Teknika marani-tsaina namorona mpamorona YouTube napetraka indrindra hitazomana ny mpihaino azy ireo amin'ny alàlan'ny fananganana mialoha ny horonan-tsary manaraka.
Horonantsary mozika vaovao, fanombohana vokatra vaovao, endrika vaovao amin'ny vokatrao, serivisy vaovao, na fiaraha-miasa tampoka amin'ny kintana malaza iray aza! Na inona na inona izany dia tadidio ny mitaona ny mpihaino anao amin'ny fanomezana azy ireo santionany ny amin'izay ho horonantsarinao manaraka. Raha mahavita tsara ny asanao ianao dia azonao antoka fa ho tonga eo ny mpijery tsy mivadika anao hijery ilay horonantsary manaraka miaraka amina fofonaina manome anao ireo tiany YouTube maimaimpoana.
7. Mamorona Playlists hitazomana ny mpijery anao hifamatotra
Manana andiana horonantsary azo alamina tsara kokoa amin'ny lisitra milalao ve ianao? Angamba ianao manolotra lesona momba ny kaonty ary manisy lohahevitra iray isaky ny horonan-tsary iray. Sa, manana andiana webinaritra ianao? Na inona na inona izany, ny lisitry ny playlist dia mamela anao hampandroso ny tongotrao tsara indrindra amin'ny fampisehoana ireo mpijery anao fa misy fitohizan'ny atiny. Amin'ny alàlan'ny famoronana lisitra an-tsehatra dia mitarika azy ireo mandritra ny dia lavitra ianao ary manintona ny fanirian'ny mpijery.
Tombontsoa iray hafa amin'ny playlists dia ny fampitomboan'izy ireo ny fotoana fijerin'ny fantsonao. Ny horonan-tsary dia mandeha amin'ny maody 'AutoPlay' amin'ny filaharana efa voafaritra. Izy io dia mitovy amin'ny fomba itadiavan'ny taranaka an'arivony taonina amin'ny andiany Netflix. Amin'ny alàlan'ny lisitry ny lisitry ny YouTube dia afaka manatratra ny faniriana sy valiny mitovy amin'izany ianao, amin'ny fanomezana antony marobe amin'ny fantsonao hanangona ireo tiany YouTube maimaimpoana.
8. Mampiasà karatra sy farano ny efijery hampiroboroboana horonantsary hafa
Fitaovana mahery vaika ny efijery farany sy ny karatra izay misy fiatraikany bebe kokoa amin'ny antso ataonao. Araka ny tondroin'ilay anarana, ny efijery farany dia sary izay tonga amin'ny faran'ny horonan-tsarinao izay azo ampiasaina hangataka ny mpijery anao hisoratra anarana. Na, azonao atao aza ny mampiasa azy hampiroborobo ny tranonkalanao na manondro ny mpihaino anao amin'ny horonan-tsary manaraka. Raha tianao dia azonao atao ny miverina ary manampy efijery farany amin'ny horonantsary taloha izay efa navoaka tao amin'ny fantsonao. Ity dia fomba tsara iray hahazoana mpanjifa YouTube maimaim-poana ary hampiroborobo ny fitiavana YouTube maimaim-poana.
Mba hanampiana efijery farany, mandehana fotsiny amin'ny menio ankavanan'ny Creator Studio ary kitiho ny atiny. Safidio ny horonan-tsary tianao ampiana ny efijery farany. Kitiho ny boaty efijery farany izay hita eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery. Azonao atao ny misafidy singa efatra famandrihana efatra mifototra amin'ny tanjonao.
9. Aza adino ny mifanerasera amin'ny mpijery anao
Ny fahazoana sitraka YouTube maimaim-poana dia mitaky ezaka tsy tapaka avy aminao. Tsy mora ny mandresy mpijery vaovao raha ny fifaninanana hitantsika anio. Ny fomba hendry hiasa amin'io dia ny fanomezana ny sain'ireo mpijery anao mitovy. Avelao izy ireo hahatsapa ho sarobidy sy ankasitrahana amin'ny fanampiana anao ho mpamorona anao. Miaraha miasa amin'izy ireo amin'ny hafatrao. Valio ny hevitr'izy ireo. Fantaro izay tian'izy ireo na tsy tiany momba ny horonan-tsarinao.
Rehefa mamorona fifandraisana misy dikany toy izany amin'ny mpihaino anao ianao dia midika hoe tsy fivadihana maharitra. Rehefa maheno ny soso-kevitr'izy ireo ianao ary manao zavatra mifanaraka amin'izany dia mahatsapa izy ireo fa henoina ary mifandray bebe kokoa amin'ny atiny. Aza adino, ny mpijery faly dia afaka mitondra mpijery marobe amin'ny alàlan'ny fanaovana dokambarotra am-bava ary mizara ny atiny amin'ireo sakaizan'izy ireo.
10. Diniho ny Trailers Channel mba hamoahana ny mpijery anao
Te hampahafantatra an'ireo mpijery vaovao anao ve hoe inona ny momba ny fantsonao YouTube amin'ny fomba tsotra sy haingana? Midira - Channel Trailers. Ireo dia toy ny tranofiaran-tsarimihetsika izay manome tampon-tampoka amin'ny zavatra ataonao sy ny atiny noforoninao ho an'ny mpijery anao. Azonao atao ny mampiasa ny tranofiara fantsona hanasongadinana ireo soa azo avy amin'ny fantsonao. Aza adino ny mitazona ny halavany eo anelanelan'ny 25 sy 30 segondra.
Ilay tranofiara dia afaka mampita ny tantaran'ny marikao, ny tanjonao ary izay kasainao ho tratrarina amin'ny alàlan'ny fantsona. Mila manaitaitra aingam-panahy, mampihomehy, na mampihetsi-po ve izany? Na inona na inona mety aminao ary mifanaraka amin'ny laharanao. Ataovy misy akony io mba hahafahan'ny mpijery miovaova ho mpamandrika mora foana.
11. Mamorona Thumbnails manokana mahasarika maso
Ny sary kely dia sary preview izay miasa ho fonony amin'ny horonan-tsarinao. Io no zavatra voalohany jeren'ny mpijery rehefa tonga ao amin'ny pejinao izy ireo. Fantatsika rehetra, ny fahatsapana voalohany no fiheverana farany. Noho izany, apetraho ny ezaka rehetra ataonao mba hamoronana sary kely mahasarika maso izay mihoatra ny fandraisana anjara. Matetika, ny haantsamboky ny horonan-tsarinao dia lasa antony manapa-kevitra raha misafidy ny hilalao ny horonan-tsarinao ny mpijery na iray hafa amin'ny valin'ny karoka.
YouTube koa dia mamorona sary thumbnail default ho an'ireo horonan-tsary amin'ny alàlan'ny famoahana sary tsy kisendrasendra fotsiny avy amin'izany. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, tsy dia tsara loatra ity ahafahana mampandeha ny fifamoivoizana amin'ny horonan-tsarinao ary manentana ny mpijery hanindry. Manoro hevitra anao izahay mba hamorona ny renirano. Avelao izy ho 1280 x 720px araka ny soso-kevitr'ireo torolàlana ao amin'ny YouTube.
Soso-kevitra Pro: Ny endrika mitsiky mijery mivantana ao anaty fakantsary dia toa miasa saika amin'ny fotoana rehetra isaky ny karazana horonan-tsary.
12. Manentana ny mpijery raha misoratra anarana amin'ny fantsonao izy ireo
Isika olombelona dia tia zavatra maimaim-poana. 'Inona no ato amiko?' Izany no mahatonga ny antony indraindray mahatonga antsika hanao zavatra na tsia. Mahagaga fa mahaliana toy ny manintona ny fijerinao ny YouTube ity koa. Te hampitombo ny tianao YouTube maimaimpoana na hanana olona maro haneho hevitra momba ny hafatrao? Ny fomba marani-tsaina dia ny fanaovana fifaninanana. Lazao amin'ny mpijery anao raha misoratra amin'ny fantsonao izy ireo ary manome hevitra momba ny hafatrao, nahazo vokatra maimaim-poana izy ireo. Na, dika mitovy amin'ny bokinao nosoniavina, na fanandramana maimaimpoana an'ireo rindrambaiko. Raiso ny fandavahana?
Rehefa mampiditra valisoa amin'ny fidirana amin'ny fantsonao YouTube ianao dia afaka mahita fiakarana vonjimaika ny isan'ny mpanjifanao ary koa ny firotsahana amin'ny ankapobeny. Raha vao manana ny sain'izy ireo ianao dia tariho izy ireo miaraka amin'ny atiny maharesy lahatra hatrany, mba ho lasa mpijery anao mandritra ny androm-piainany izy ireo.
13. Miaraha miasa amin'ireo mpamorona hafa mba hampiroboroboana ny Tiana YouTube Maimaimpoana
Mety misy marika ao amin'ny YouTube izay mitovy asa aminao. Azo atao koa ny manana mpihaino mitovy amin'izany. Maninona raha mifampiara-miasa amin'ny mpijery amin'ny alàlan'ny fifanomezan-tanana sy ny fahazoana tombony? Ohatra, azonao atao ny mangataka manam-pahaizana iray amin'ny sahaninao hanao tafatafa aminao amin'ny fantsonao. Hanampy ny mpankafy azy ireo ao amin'ny fantsonao izany ary hampitombo ny fototra iorenanao. Mandritra izany fotoana izany, ireo mpijery anao izay tsy nahalala ny manam-pahaizana dia afaka misoratra anarana amin'ny fantsony koa raha toa ka mihaona amin'izy ireo ny atiny.
Ny fiaraha-miasa amin'ireo influencers hahazoana eyeballs bebe kokoa ho an'ny fantsonao dia mety ho ilay tranainy tranainy indrindra amin'ny boky marketing nefa tsy mahomby amin'ny fampiasana ny majika. Rehefa mahita ny fiaraha-miasa toy izany ny mpihaino anao dia mety hiteraka tolo-kevitra na hevitra bebe kokoa ao an-tsain'izy ireo izany. Mety hanome hevitra momba ny hafatrao izy ireo ary hilaza aminao izay artista hafa tadiavin'izy ireo hahita anao hiara-miasa aminao.
Search Engine Optimization dia manome antoka fa afaka mahita ny atiny ny olona rehefa mitady azy amin'ny fampiasana teny lakile sasany. Ohatra, manana fantsom-pahandroana ao amin'ny YouTube ianao. Mamorona horonantsary amin'ny sandwich voahandro ianao. Ahoana no hahitan'ny olona an'io horonantsary io raha tsy manatsara ny lohateny, famaritana ary mampiasa ireo tenifototra mifandraika ianao? Ny fitaovana SEO toy ny Google Planner dia mamela anao hahafantatra ireo teny lakile avo indrindra ampiasain'ny olona hahitana fampahalalana sasany.
YouTube SEO dia miantoka anao tsy hanao horonantsary amin'ny lohahevitra izay tsy tadiavin'ny olona. Na lohateny izay tsy misy mahita. Raha tsy azonao antoka ny fomba hahitana teny fanalahidy mety amin'ny fampiasana fitaovana an-tserasera, diniho ny fantson'ny mpifaninana aminao ary jereo izay teny lakile toa mandeha. Azonao atao koa ny mampiasa YouTube Analytics hahitana izay teny lakile manome anao ny vokatra tsara indrindra.
15. Andramo ny YouTube Live
Ny horonantsary mivantana dia nanjary fironana izay hijanona eto. Mihamaro isa ny fampiharana toa ny Instagram sy Facebook no mahazo an'io endri-javatra io izay manamora kokoa ny fidiran'ny marika. Manomboka amin'ny fivoriana Q&A mahaliana sy webinar hatramin'ny fampianarana mivantana sy fampisehoana vokatra, misy zavatra tsy tambo isaina azonao zahana amin'ny YouTube mivantana hahazoana mpanjifa YouTube maimaimpoana.
Ny haavon'ny fifamatorana sy ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika izay azonao haorina amin'ny seho mivantana dia tsy manam-paharoa. Na fahatsapana voajanahary sy voajanahary amin'ilay horonantsary mivantana na tsy fahatokisana sy fientanam-po amin'izay hitranga, dia andramana ny mivantana mivantana. Alohan'ny handehananao mivantana dia tadidio ny mampiasa vola amin'ny fitaovana sy jiro sahaza azy mba ho matihanina kokoa ny lahatsarinao.
Manantena izahay fa ireto torohevitra etsy ambony ireto dia mety ho mora ampiasaina hampiroboroboana ny marikao amin'ny fantsonao ary hahazo mpamandrika YouTube maimaim-poana. Aza adino, tsy misy fomba iray mifanaraka amin'ny marketing amin'ny horonan-tsary. Izy io dia dingam-pianarana ianaranao izay ianaranao tsikelikely izay mety aminao sy izay tsy mety. Tanjona ny hamoronana atiny mahaliana ary alefanao tsy tapaka hananganana base tsy mivadika. Lahatsary misy tadiny mitovy amin'ilay napetraka ao anaty lisitra iray mba hanamorana ny fitohizany. Tandremo ny fanatsarana ny lohateninao, ny famaritanao ary ampiasao ny tenifototra ahafahana misarika olona betsaka kokoa amin'ny atiny video.
Raha toa mavesatra loatra aminao ny marketing YouTube ary mila fanampiana matihanina ianao, izahay, ao amin'ny YTpals, dia manompo anao. Manana ny fitaovana sy ny fahaizana izahay mba hanomezana anao tian'i YouTube maimaim-poana amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny mpamandrika amin'ny alàlan'ny vahaolana SEO tsara sy ireo teknika voaporofo amin'ny indostria.
Mifandraisa aminay amin'ny filanao marketing YouTube rehetra. Ny ekipa manam-pahaizana momba ny finamanana dia faly mianatra ny momba ny fitakian'ny orinasa sy manolotra vahaolana namboarina mifanaraka amin'ny ilainao.
Lahatsoratra farany amin'ny bilaogy
XunXth June 6
Ny mpamorona votoaty YouTube dia miady amin'ny mpamorona maro hafa mba hisarihana ny sain'ny mpijery. Mety ho sarotra ny manangona fizarana YouTube maimaim-poana sy fanehoan-kevitra YouTube maimaim-poana....
Ny mpamorona votoaty YouTube dia miasa amin'ny paikadin'izy ireo SEO mba hampiakatra ny mpifaninana aminy ary hanatsara ny laharan'ny YouTube. Raha mijery horonan-tsary, ny algorithm YouTube dia mandray mpijery ihany koa ...
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny herin'ny firotsahana sy ny fiovam-po amin'ny votoaty video, azonao atao ny manokatra ny fahafaha-mivarotra marika lehibe ao amin'ny YouTube. Amin'ny maha-motera fikarohana faharoa lehibe indrindra, ny Google an'ny...
Ampiasao ny taratasy fandefasana haingana eto ambany
Serivisy kilasy voalohany!
Nividy ny Views YouTube, Sitraka sy Mpanoratra ho an'ny fantsona aho tamin'ny YouTube ary nomen'izy ireo ny zava-drehetra sy bonus sasany maimaim-poana! Hiresaka matetika ny YTPals aho!
Misaotra betsaka YTPals
Misaotra betsaka YTPals, manantena aho fa hanome anao kintana 10. Tiako ianareo rehetra, ary ny asa mahasoa ataonareo.
Aza misalasala fanindroany!
YTPals, misaotra betsaka tokoa noho ny fanampianao, nisondrotra intelo toy ny lehibe tahaka ny tamin'ny fotoana nanombohako ny fampahalalaka maimaimpoana anao ny fantsona nataoko. Nandia 100 ambany fotsiny aho hatramin'ny 300 mahery tao anatin'ny fotoana vitsivitsy!
Midira ao amin'ny tambajotran'ireo tompona fantsona YouTube mahomby mihoatra ny 500,000 izay mahazo mpanjifa YouTube maimaim-poana hanampiana ny fivoaran'ny fantsona YouTube ananany.
Mahazoa famandrihana maimaim-poana ankehitriny!